Xalka: Gimp wuxuu xiraa markaan adeegsaneyno qalabka qoraalka | Laga soo bilaabo Linux
Waxaan jeclahay in badan oo isticmaala ArchLinux iyo KDE, dhibaatadu waa sidaan ku iri cinwaanka, ma xasuusto tan iyo markii si gaar ah (dhawr bilood ka hor) laakiin markasta oo aan furo Gimp oo waxaan isku dayaa inaan isticmaalo aaladda qoraalka (si aan u qoro haa) codsigu wuu xirmayaa.
3 Dhibaatada cirridka iyo xalka fiidiyowga:
Haddii aan ku furo terminal si aan u arko qaladka, waa tan aan helayo:
Barnaamijka 'gimp' wuxuu helay qalad Nidaamka Daaqada X Window. Tani waxay u muuqataa inay ka muuqato cillad barnaamijka ku jirta. Ciladdu waxay ahayd 'BadWindow (oo aan caadi ahayn dhimaha daaqadda)'. (Faahfaahin: taxane ah 7929 error_code 3 request_code 1 small_code 0) (Xusuusin barnaamijyada: sida caadiga ah, khaladaadka X waxaa loo sheegaa si isku mid ah; taas oo ah, waxaad heli doontaa qaladka in yar ka dib markii aad sababtay. Si aad u khaladto barnaamijkaaga, ku socodso - Ikhtiyaar ikhtiyaarka xariijinta nidaamka si aad u beddesho habdhaqankan Waxaad markaa ka heli kartaa dib-u-dhac macno leh qashin-qadahaaga haddii aad jabiso howlaha gdk_x_error ().) (script-fu: 12802): LibGimpBase-DIGNIIN **: script-fu: gimp_wire_read ( ): khalad
1) Si tan loo xaliyo, aan marka hore isku dayno inaan ku furno Gimp muuqaal cusub, taas oo ah, annaga oo aan tixgelinaynin doorbidyadeena hore. Si tan loo sameeyo, aan dhigno amarka soo socda terminal:
Oo waxaan fureynaa Gimp oo waxaan doorannaa aaladda qoraalka si aan u aragno inay xallisay.
2) Haddii ay dhibaatadu sii jirto, xalka saxda ahi waa:
HA U adeegsan QtCurve qaab ahaan barnaamijyada GTK
Xalku waa isku mid, Elav wuxuu ii sheegay in aanan garaneynin halka cadaabta nacasku ka aqrisay, laakiin si fiican ayey u shaqeysaa 😀
Taasi waa, waa inaan:
1. Fur Xulashada KDE
2. Tag Imaatinka Codsiyada
3. Aan tagno tabta GTK halkaasna waxaan uga beddeleynaa «Xulo dulucda GTK2»Iyo«Xulo dulucda GTK3»Waxaanna dhigeynaa wax aan aheyn QtCurve, tusaale ahaan ogsijiin-gtk
Halkan waxaan ku tusayaa sawir sida aan u haysto:
Xal kale ayaa ah:
1. Tafatir faylka $ GURI / .gtkrc-2.0 iyo khadka uu leeyahay gtk-theme-magaca, ka saar qtcurve oo saaray ogsijiin-gtk
Waa tan sida aan u haysto faylkaas:
Dhibaatada cirridka iyo xalka fiidiyowga:
Halkan waa a video muujinta dhibaatada sidoo kale sidoo kale, xalka:
Waa hagaag waxba, tani waa tan kaliya ee kaliya ee si dhab ah loogu hagaajin karo dhibaatada Gimp marka la isku dayayo in la isticmaalo qalabka qoraalka. Ma aqaano haddii ay tahay qalad Gimp ama QtCurve ama bug ah, iswaafaq la’aan dhexdooda ah, garan maayo hubaal ... laakiin haye, ujeedku waa inaan horay u ogaanay sida loo saxo.
Waxaan rajeynayaa inay waxtar kuu laheyd.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Xalka: Gimp wuxuu xiraa markaan fureyno qalabka qoraalka
Meelna kamaan akhriyin, waxaan ku ogaaday markaan ka wareegayo QtCurve oo aan u wareegayo Oxygen .. Laakiin, si kadis ah hada waxaan isticmaalayaa QtCurve mana igu dhacdo aniga, markaa waxaan u janjeeraa inaan u maleeyo inay la socoto uun mawduuca KElementary.
Dhab ahaan isku mid ayaa ku dhici karta Inkscape iyo xalka aan siiyay waxay ahayd in la dhigo mawduuc gtk halkii QtCuve ah
Inkscape-ga waligey igama dhicin, in kastoo hadda aan xasuusto ... Audacity wuxuu i tusayay FATAL, hadda markaan sameeyay isbeddelka GUI ee aniga ii shaqeeya dhib la'aan.
Waxaan hayaa xal kale 😉
sudo karti rakibida calligra
halkaas waxaad ka heli doontaa Krita, wuxuu u dhashay Qt wuxuuna taageeraa wax kasta oo Gimp sameeyo, fiiri isaga si aad u aragto
Halkaas ayaad ku siisay Si aad u sawirto, ma jiraan wax ka fiican. Waxyaabo kale ayaa noqon lahaa mid dijitaal ah iyo muuqaal dib loo soo cusbooneysiinayo ... By the way, waxay bilaabeen ciriiriga kickstarter, iyo maadaama Linux aysan wax dareen ah siinin porbre krita, oo ah mid ka mid ah qalabka ugu fiican ee aan ku haysanno Linux ...
Ku jawaab fistri
Dhibaatada aan ku qabo Calligra iyo gaar ahaan Krita waa in aanan la qabsan habka ay u shaqeyso iyo qalabkeeda 🙁 laakiin waxaan qirayaa inay iyadu heer sare tahay.
"Ma aqaano haddii ay tahay qalad Gimp ama QtCurve ama bug ah, iswaafajin la'aan udhaxeysa, ..." iyo haddii ay dhibaato cilad ahayd? maxaa yeelay anigu waxaan ku jiraa fedora qtcurve wax dhib ah kuma qabo markaan isticmaalayo qalabka qoraalka ee gimp 2.8.10
Waa su'aal mowduuca ka baxsan, laakiin muxuu shaashadda ku faafay daboolka maqaalka? Waxaan jeclaan lahaa inaan ku dhejiyo maarkayga.
Maaha markii ugu horreysay ee QTCurve ay dhibaato keento. Markii aan rabay inaan furo Braindump, waxay i tusi lahayd qalad markasta oo aan sameeyo. Hadda wax walba waan u beddelay Oxygen-ka oo si bilaa cillad ah ayey u shaqeysaa.
Xaqiiqdii aniga iguma dhowa, laakiin haddii aan isku dayo inaan qoro qoraal aan madow ahayn oo leh SMOOTH, qoraalka wuxuu u muuqdaa mid laga naxo. Haddii ay ku dhacdo qof, way ogaan doonaan waxa aan ula jeedo.
Hagaag, waan ku qaldan ahay, maxaa yeelay waxaan isticmaalaa Lubuntu oo si sax ah isla waxbaa igu dhaca, laakiin dabcan, tani kuma khusayso kiiskeyga ... si kastaba ha noqotee, haddii aad wax ka hesho wax i sii taabasho
Waxaa jira qaab fudud oo lagu hagaajin karo tan markii ay ugu wacan tahay font musuqmaasuq oo dhowaan la rakibay.
Waxaan ka fureynaa gimp-ka terminal-ka waxaanan isku dayeynaa inaan adeegsanno ilaha laga helo. Barnaamijku wuu burburayaa isagoo na siinaya macluumaadka dhibaatada ka jirta terminalka. Macluumaadkan waxaan ka heli doonnaa magaca isha musuqmaasuq.
Waxaan fureynaa nautilus, waxaan helnaa isha (waxaan ku sameeyay mashiinka raadinta) oo waan tirtirnaa. Ka dib sudo fc-cache -f -v dhibaatadii waa la xaliyay. Waxaa laga yaabaa inaan haysanno dhowr nooc oo kharribmay.
Jawaab u dir Diana J. Torres
Diana J. Torres,… waxaad garaacday bartilmaameedka (hehe) Waxaan rakibey font markii aan doonayey inaan xusho font-kan, bang! GIMP ayaa xirnaa. Waxaan furey font (Fredoka_One) dhibaatadana waa la xaliyay.
(Waa socotaa) Mar labaad ayaan rakibay font laakiin kumuu jirin faylka, taasi waa, waxaan si toos ah u rakibey feylka .ttf ee font waana uu shaqeeyaa Gabagabadii isha ma musuqmaasuq
GNUGo: Ciyaarta Go ee Terminal
Nulloy: Ciyaaryahan maqal ah oo aad u yar isla markaana sameeya qaab ballaadhan